သင့်ရဲ့ တစ်နေ့တာကို မောပန်းနွမ်းနယ်မှုစေခြင်း မရှိစေဖို့ Sunlife ရေဆူဆေးပြားများ - Shop
သင့်ရဲ့ တစ်နေ့တာကို မောပန်းနွမ်းနယ်မှုစေခြင်း မရှိစေဖို့ Sunlife ရေဆူဆေးပြားများ01056
ကျန်းမာရေးဟာ လာဘ်တစ်ပါးပါဆိုတဲ့အတိုင်း သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကို အမြဲတစေဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်နော် …🤗
Sunlife Myanmar ရဲ့ ရေဆူဆေးပြားလေးတွေက အလုပ်လည်းမရှုပ်စေဘဲ လွယ်လင့်တကူသောက်လို့ရပါတယ်နော် … လုပ်ငန်းခွင်မှာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မနေစေဘဲ အိမ်ပြန်ချိန်တွေထိ လန်းစေနိုင်မှာပါ …🤩
ဆေးသောက်မှာ ကြောက်တဲ့သူတွေအတွက်ကော၊ အခါးမကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်လည်း ခါးခါးကြီးသောက်စရာမလိုဘဲ အချိုရည်သောက်သလိုပဲဆိုတော့ အရသာလည်းရှိပြီး ကျန်းမာရေးလည်းကောင်းဆိုတော့ကာ Sunlife ရေဆူဆေးပြားကို အခုချက်ချင်းပဲ Shop ကနေ မှာယူလိုက်တော့နော် ….🏃🏻‍♀️
🟢 SUNLIFE Multivitamin လေးကတော့
သဘာ၀ သစ်သီး အနံ့အရသာရှိပြီးတော့ အရသာရှိစွာ သောက်သုံးနိုင်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်မှ လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ စုပ်ယူနိုင်၍ အာနိသင် အပြည့်အဝကို ချက်ချင်း ရနိုင်ခြင်း၊ သကြားဓာတ်မပါဝင်သဖြင့် ဆီးချို ဝေဒနာရှင်များလည်း စိတ်ချစွာ သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်နော် …ဗီတာမင်များစွာပါဝင်တဲ့အတွက်လည်း သင့်ရဲ့တနေ့တာကို ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းနိုင်မှာပါနော် …
ရေဆူအားဆေး တစ်ပြားလျှင် ရေ တစ်ဖန်ခွက် (200ml) ဖြင့် ဖျော်သောက်နိုင်ပါသည်။
🟡 SUNLIFE Vitamin C (180mg) လေးကတော့
သဘာ၀ သစ်သီး အနံ့အရသာရှိပြီးတော့ အရသာရှိစွာ သောက်သုံးနိုင်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်မှ လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ စုပ်ယူနိုင်၍ အာနိသင် အပြည့်အဝကို ချက်ချင်း ရနိုင်ခြင်း၊ သကြားဓာတ်မပါဝင်သဖြင့် ဆီးချို ဝေဒနာရှင်များလည်း စိတ်ချစွာ သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်နော် … ဗီတာမင်စီအပြင် လီမွန်အရသာလေးကြောင့် သင့်ကိုစိတ်ရွှင်လန်းတက်ကြွစေမှာပါ ….
🔴 SUNLIFE Vitamin C 1000mg လေးကတော့
သဘာ၀ သစ်သီး အနံ့အရသာရှိပြီးတော့ အရသာရှိစွာ သောက်သုံးနိုင်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်မှ လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ စုပ်ယူနိုင်၍ အာနိသင် အပြည့်အဝကို ချက်ချင်း ရနိုင်ခြင်း၊ သကြားဓာတ်မပါဝင်သဖြင့် ဆီးချို ဝေဒနာရှင်များလည်း စိတ်ချစွာ သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်နော် … စတော်ဘယ်ရီလေးအရသာလေးကြောင့် အရသာရှိရှိနဲ့ လည်း သောက်သုံးနိုင်တာကြောင့် သင့်ရဲ့တစ်နေ့တာကို အင်အားအပြည့်နဲ့ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါတယ် ….
🟠 SUNLIFE Energy Drink
သင့်ရဲ့တစ်နေ့တာ မောပန်းစွာ လှုပ်ရှားကျော်ဖြတ်ရတာကြောင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ရင်တော့ SUNLIFE Energy Drink ကိုတော့ မမေ့သင့်ဘူးနော် ….သကြားဓာတ်လျော့နည်းစွာ ပါဝင်ပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်စွာ ထုတ်လုပ်နိုင်တာကြောင့် ရွေးချယ်မို့ အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော် ….
🔵 SUNLIFE Calcium
သဘာ၀ သစ်သီး အနံ့အရသာရှိပြီးတော့ အရသာရှိစွာ သောက်သုံးနိုင်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်မှ လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ စုပ်ယူနိုင်၍ အာနိသင် အပြည့်အဝကို ချက်ချင်း ရနိုင်ခြင်း၊ သကြားဓာတ်မပါဝင်သဖြင့် ဆီးချို ဝေဒနာရှင်များလည်း စိတ်ချစွာ သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်နော် … Calcium တွေလည်း အများကြီးပါဝင်တာဆိုတော့ တစ်နေ့တာ ဖြတ်သန်းမှုကို အပေါ့ပါးဆုံးဖြတ်သန်းနိုင်မှာပါနော် …
Sunlife မှ ဝယ်ယူရန်လင့်ခ် > > > http://bit.ly/2P7CvFB
Previous Articleထိခိုက်လွယ်တဲ့ Sensitive အသားအရည်ပိုင်ရှင်များအတွက် Bioderma Skin CareNext Articleအိမ်မှာသုံးဖို့ဖြစ်ဖြစ်၊ ရုံးမှာသုံးဖို့ဖြစ်ဖြစ် Printer လေးတစ်လုံးဝယ်ဖို့လိုအပ်နေပြီလား? 🤔